FAQs - Tianjin TheOne Metal Products Co., Ltd.
Clamp an'ny karazana alemà
Fifandonana amin'ny alàlan'ny hosotra alemana
Fitapanan-doko amerikana karazana
Fametahana hosoka amerikana karazana amin'ny tànana
Fifandonan'ny karazana eoropeana karazana
Mavesatra Adidy American Type Hose Clamp
Famantaran'ny hosoka anglisy
Clamp Double Bandt Double Band
Double Bolt Double Band Pipa Clamp
T Type Pamp Clamp
T Type Pipo Clamp Miaraka amin'ny Lohataona
Vovonana Fantsona V Fantsona
U Bolt Fantsakan-dàlana
Fantsakanana fantsona fantsona
Fametahana fantsona amin'ny baoty
Fampitaovana kofehy roa
Fampitaovana kodiarana frantsay frantsay roa
Famenonana Mini Hose
Fantsakan-tanana amin'ny sofina
Fampitaovana lohataona lohataona
Voalohany, safidio ny mpamatsy akora manta tsara indrindra miaraka amin'ny vidiny ambany indrindra
Faharoa, mampitombo ny fahaiza-manao famokarana, mampihena ny vidin'ny famokarana,
Fahatelo, ny dingana famokarana mitambatra, mampihena ny vidin'ny mpiasa.
Ny sisa dia aza kosorina ny toerana fonosana ary ahena ny vidin'ny fandefasana.
Eny, afaka manome ny ankamaroan'ny tahirin-kevitra izahay ao anatin'izany ny Certification Material, Report Inspection Product ary ireo taratasy fanadiovana mahazatra.
Ho an'ny santionany, ny fotoana fitarihana dia eo amin'ny 2-7 andro. Ho an'ny famokarana faobe dia 20-30 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Manjary mandaitra ny vanim-potoana ireo rehefa 1) nahazo ny famandrihana nataonao, ary (2) nahazo ny fankatoavanao farany ny vokatrao ianao. Raha toa ka tsy mandeha amin'ny fe-potoana voatondro ireo loham-pianaranay dia midira fotsiny ny zavatra takinao amin'ny varotrao. Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome ny zavatra ilainao izahay. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia afaka manao izany isika.
Azonao atao ny mandray ny fandoavam-bola amin'ny kaonty banky, Western Union, T / T, L / C eo imasony sy ny sisa.
Fametrahana 30% mialoha, 70% mizana alohan'ny handefasana azy
Inona ny fanaraha-maso ny kalitao vokatra?
1.Alohan'ny famokarana, dia mandinika ireo fitaovana rehetra sy ny simika ary ny akora ara-batana isika
2. Amin'ny fizotran'ny famokarana, ny QC dia manatanteraka fisavana ara-potoana sy fisavana toerana.
3.mba vokatra vita, hojerentsika ny fisehoana, ny bandwidth * ny hateviny, ny maimaim-poana sy ny fanamafisana ny tasy sy ny sisa
4. Alohan'ny fanaterana dia haka sary ho an'ny entana izahay, avy eo ny rakotra fisavana rehetra dia hotazonina ao anaty rakitra ary hanao tatitra fisavana.
Ny fonosana mahazatra dia kitapo plastika anatiny ary ivelan'ny baoritra ivelany misy pallet.Toho dia hisoroka ny entana tsy ho maina sy ny baoritra ho simba .Raha manana fepetra hafa koa ianao, pls hifandraisa aminay dia hiezaka hahatratra izany aminao izahay.